ထိုင်း​နိုင်ငံက မြန်မာ​ရေ​ဘေး​ဒုက္ခသည်များ​ကို မြန်မာသံရုံး​အကူအညီ​ပေး​နေ
ကောက်အ​ခြေစိုက် ထိုင်း​နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး​က ရေ​ဘေး​ဒုက္ခသင့်​ပြီး​မြန်မာပြည်ပြန်ချင်တဲ့​မြန်မာ​လေး​ဆယ်ခန့်​ကို စရိတ်ကုန်ကျခံပြီး​မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ပို့​ပေး​ခဲ့​ပါတယ်။
ဘန်​ကောက်မြို့​အထက် နွံထဘူရီခရိုင် အစား​အ​သောက် လုပ်ငန်း​စက်ရုံက မြန်မာအလုပ်သမား​၄၁ ဦး​ကို မြန်မာပြည်ပြန်နိုင်ဖို့​မ​နေ့​က သံရုံး​ကို​ခေါ်ယူပြီး​လိုအပ်တဲ့​အကူအညီ​တွေကို ပေး​ခဲ့​တယ်လို့​ကိုယ်တိုင်ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်​ပေး​ခဲ့​တဲ့​ထိုင်း​– မြန်မာအသင်း​BAT တာဝန်ခံတဦး​က ပြောပါတယ်။
“​ရေ​တွေကြီး​နေတာလည်း​တပတ်​လောက်ရှိပြီ။ ပတိုနမ်း​မှာရှိတဲ့​မြန်မာ​တွေ ကူညီ​စောင့်​ရှောက်တဲ့​အဖွဲ့​က ရေကြီး​တဲ့​သူ​တွေကို ကယ်ထုတ်လာတယ်။ လပ်​ဖောင်း​အမျိုး​သမီး​ဖောင်​ဒေး​ရှင်း​ဌာနဝင်း​ထဲမှာ သူတို့​ကို ထား​တယ်။ ကျ​နော်တို့​အဖွဲ့​နဲ့​မြန်မာသံရုံး​ကို သူတို့​အ​ကြောင်း​ကြား​လာတယ်။ သံရုံး​ကလူ​တွေလည်း​ရောက်​နေတယ်။ သူတို့​အခက်အခဲ​တွေ​မေး​တယ်။ နောက်​တော့​မဲ​ဆောက်ကို ကား​တစီး​စာနဲ့​သူတို့​ကို မ​နေ့​က ပြန်ပို့​ပေး​လိုက်တယ်။”
ဘန်​ကောက် – မဲ​ဆောက် လမ်း​ခရီး​တ​လျှောက်က စစ်​ဆေး​ရေး​ဂိတ်​တွေက​နေပြီး​ဖမ်း​ဆီး​အ​ရေး​ယူတာ​တွေ မလုပ်ဖို့​ကိုလည်း​သက်ဆိုင်ရာ ထိုင်း​အာဏာပိုင်​တွေရဲ့​စည်း​တံဆိပ် လက်မှတ်​ထောက်ခံစာ​တွေကို မြန်မာသံရုံး​က ထုတ်​ပေး​တယ်လို့​ဆိုပါတယ်။
ကျသင့်​တဲ့​ကား​ခနဲ့​စား​စရိတ်​တွေကိုလည်း​သံရုံး​က အား​လုံး​စီစဉ်​ပေး​ပြီး​အလုပ်သမား​တဦး​ကို ဘတ်​ငွေ ၂၀၀ ဆီ မြန်မာသံမှူး​ဦး​နိုင်ထွန်း​ကိုယ်တိုင် ပေး​အပ်ခဲ့​ပါတယ်။
မြန်မာသံရုံး​က​နေ ရေ​ဘေး​ဒုက္ခသည်​တွေကို ကူညီတာဟာ ပထမဆုံး​အကြိမ် ဖြစ်တယ်လို့​သိရပါတယ်။
ဘန်​ကောက်မှာ နေထိုင်တဲ့​မြန်မာ​စေတနာရှင်​တွေကလည်း​သံရုံး​က စီစဉ်ပို့​ဆောင်​ပေး​တဲ့​မြန်မာအလုပ်သမား​တွေအတွက် ဘတ်တ​သောင်း​လေး​ထောင် အကူအညီ​ပေး​လိုက်ပါတယ်။
မြန်မာအလုပ်သမား​တွေဟာ ဝပ်လပ်ခင် ဘုန်း​ကြီး​ကျောင်း​ကို လာ​ရောက်ဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့​မြန်မာသံရုံး​က မြန်မာအလုပ်သမား​ကူညီ​ရေး​အဖွဲ့​တွေကတဆင့်​ကြေညာထား​ပါတယ်။
ထိုင်း​အစိုး​ရအလုပ်သမား​ဝန်ကြီး​ဌာနကလည်း​မြန်မာသံရုံး​၊​မြန်မာ အလုပ်သမား​ကူညီ​ရေး​အဖွဲ့​တွေနဲ့​ညှိနှိုင်း​ပြီး​မြန်မာ​ရေ​ဘေး​သင့်​အလုပ်သမား​များ​အတွက် ဝပ်လပ်ခင်ဘုန်း​ကြီး​ကျောင်း​မှာ ယာယီခိုလှုံ​ရေး​စခန်း​ကို ဖွင့်​လှစ်ထား​ကြောင်း​ဘန်​ကောက်အ​ခြေစိုက် HRDF ခေါ် လူ့​အခွင့်​အ​ရေး​နဲ့​ဖွံ့​ဖြိုး​ရေး​ဖောင်​ဒေး​ရှင်း​က တာဝန်ခံ
“​လော​လောဆယ် အ​ယောက် ၅၀၀ ယောက် လောက်ရှိ​နေပြီ။ နောက်ထပ်လည်း​အလုပ်သမား​တွေကို သီး​သန့်​လက်ခံနိုင်ဖို့​အတွက် ထပ်ပြီး​တိုး​ချဲ့​ဖွင့်​လှစ်နိုင်ဖို့​ဆွေး​နွေး​နေကြတယ်။”
ဘန်​ကောက်မြို့​အ​ရှေ့​နဲ့​အ​နောက်ဘက်အခြမ်း​က​နေ ရေလမ်း​လွှဲ​ပေး​နေ​ပေမယ့်​ဘန်​ကောက်မြို့​မြောက်ပိုင်း​ရပ်ကွက်ဇုန်​တွေမှာ ရေလွှမ်း​မိုး​မှုကို မရပ်တန့်​နိုင်​သေး​တဲ့​အ​ကြောင်း​နောက်ထပ် တလခွဲခန့်​ဘန်​ကောက်မှာ ရေဆက်လက်လွှမ်း​နေမယ်လို့​ထိုင်း​အစိုး​ရ ဒီက​နေ့​ထုတ်ပြန်ထား​ပါတယ်။
ဒီက​နေ့​ထုတ်ပြန်ချက်အရ ရေ​ဘေး​ကြောင့်​လူ ၃၅၀ ကျော် သေဆုံး​ခဲ့​ရပြီလို့​သိရပါတယ်။ သစ်ထူးလွင်
10/24/2011 07:08:00 PM
အမေရိကန် အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် မူဝါဒ ညှိနှိုင်းရေးမှူး မစ္စတာ ဒဲရက်ခ် ဂျေ မစ်ချဲလ် Derek J. Mitchell သည် ၎င်း၏ နှစ်ရက်ကြာ ခရီးစဉ်အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့သို့ တနင်္လာနေ့ က ရောက်ရှိနေသည်။မကြာမီ နေပြည်တော်ရှိ အစိုးရ အရာရှိများနှင့် တွေ့ဆုံနိုင်ရန် သွားရောက်မည်ပြီး ခရီးစဉ် အတွင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ထပ်မံလွှတ်ပေးရေး ဖိအားပေးသွားရန်နှင့် လူမျိုးစု ဒေသများ အတွင်း စစ်မက်ဖြစ်ပွားမှု ကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်း ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း AP သတင်းတပုဒ်တွင် ရေးသားထားသည်။ခရီးစဉ်အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD နှင့် တွေ့ဆုံ နိုင်လိမ့်မည်ဟုပြောခွင့်ရ ဦးအုန်းကြိုင်က မျှော်လင့်သည်။
အမေရိကန်အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် မူဝါဒ ညှိနှိုင်းရေးမှူး မစ္စတာ ဒဲရက်ခ် ဂျေ မစ်ချဲလ် Derek J. Mitchell ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိ (ဓါတ်ပုံ မဇ္ဈိမ)
“ ဘယ်တော့တွေ့မယ် ဆိုတာတော့ မပြောတတ်သေးဘူး။ ခုချိန်ထိတော့ ဘာမှမသိသေးဘူးဗျ” ဟု ဦးအုန်းကြိုင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ယခုခရီးစဉ်သည် Derek Mitchell ၏ ဒုတိယအကြိမ် ဖြစ်ပြီး စက်တင်္ဘာလအတွင်းက လာရောက်စဉ် နေပြည်တော်အစိုးရ အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NLD ခေါင်းဆောင်များနှင့်ပါ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးတွင် ပြောင်းလဲ တိုးတက်မှု ရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။မစ္စတာမစ်ချဲလ်သည် သံအမတ်ကြီး အဆင့်ရှိသည်ဟု အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ကြေငြာထား သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် မြန်မာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းသည့်နောက် အမေရိကန်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံရှိ သံအမတ် ကို ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး သံတမန် ဆက်ဆံရေးကို အဆင့် လျှော့ချ ထားခဲ့သည်။မစ္စတာ မစ်ချဲလ်အား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ခန့်အပ်ရန် လွှတ်တော်၌ စာရင်းသွင်းစဉ်ကမြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကြိုဆိုခဲ့ပြီး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး အတွက်စစ်မှန်သည့် ကူညီမှုမျိုးရနိုင်ရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။မစ္စတာ မစ်ချဲလ်သည် အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသ လုံခြုံရေးရာ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ဒု-လက်ထောက် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးတာဝန်ကို ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် ဧပြီလ မှ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လအထိ ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ထိုသို့ အာရှ အတွေ့အကြုံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ အတွေ့အကြုံများရှိသူ မစ္စတာ ဒဲရက်ခ် မစ်ချဲလ်ကို မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အထူး ကိုယ်စားလှယ်နှင့် မူဝါဒ ညှိနှိုင်းရေးမှူး အဖြစ် ခန့်ထားရန် အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက် အိုဘားမား၏ အဆိုပြုခဲ့ပြီး၊ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်မှ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
10/24/2011 06:58:00 PM
မြန်မာ့ရိုးရာ ညင်း တူရိယာ
43. Myanmar Hnyinn Oct 06-11
ဆောင်းပါး ပေးပို့လာတဲ့ ရန်ဝင်း ( တောင်တံခါး) အား Myanmar News Now မှ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်
အနားကို သင်္ကြန်ယာဉ်ရောက်လာတဲ့အခါမှ တီဝိုင်းသမားတွေ တီးမှုတ်လာကြတဲ့ တူရိယာတွေက အရွယ်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ ဝါးပလွေတွေ၊ သားရေကျက်ထားတဲ့ သံစည်ပိုင်းပြတ်တလုံး၊ မန်ကျည်းစေ့တွေ ထည့်ထားတဲ့ ဘူးသီးခြောက်တလုံး၊ ထန်းသီးမှုတ်တလုံးနဲ့ နိုင်ငံခြားဖြစ်ဆိုလို့ ကလယ်ရီနက် တလက်သာပါတာကို အံ့သြစရာ တွေ့ကြရလေတယ်။
အဲဒီ ‘အေ အမ် ဘီ အေ’ ရေသဘင်အဖွဲ့ကြီးကို ဆရာမြို့မငြိမ်းက ဦးစီး စီစဉ်ခဲ့တယ်။ လက်ပေါက် ခြောက်ပေါက် ဝါးပလွေတွေကိုလည်း ဆရာမြို့မငြိမ်းနဲ့ အမရပူရမြို့က နှဲဆရာကြီး ဆရာထပ် တို့ တိုင်ပင် ဖန်တီးခဲ့ကြတယ်။
ပလွေသမားတွေကို အမှတ် ၁၊ ၂၊ ၃ လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ အုပ်စုသုံးစု ခွဲထားပြီး၊ သီချင်းတီးလုံးမှာ ကိုယ့်အစုနှင့်ကိုယ် ဝင်ရောက်မှုတ်ကြဖို့ ဆရာမြို့မငြိမ်းက စီမံခန့်ခွဲပေးထားပါတယ်။
တီးမှုတ်သူတွေကလည်း တူရိယာ ပညာရှင်တွေမဟုတ်ကြဘဲ ‘အေ အမ် ဘီ အေ’ မော်တော်ယာဉ် အသင်းသား သာမန်အရပ်သားများသာ ဖြစ်ကြတယ်။ ဆရာမြို့မငြိမ်းက ဂီတပညာဆိုလို့ ဘာတခုမှ သင်ကြားမထားကြတဲ့ အဲဒီ အရပ်သားတွေကို သီချင်းတပိုဒ်ချင်း အလွတ်ချပေးပြီး ပလွေမှုတ်ဖို့ လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တယ်။ ဆရာမြို့မငြိမ်းရဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီး တပည့်လည်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုရမယ့် အမရပူရမြို့ ဇာတိ မြို့မ ဦးကိုလေး က ဦးဆောင်ပြီးမှုတ်တဲ့ ကလယ်ရီနက်နဲ့အတူ သီချင်းအလိုက်ကို ပလွေသမား ငါးဦးလောက်ကသာ သံပြိုင်မှုတ်ကြပြီး ကျန်တဲ့သူတွေက ကိုယ့်အလှည့်နဲ့ကိုယ် ဝင်ရောက်မှုတ်ကြတော့ အသံထုထည်ကို အခြေခံပြီး ဖွဲ့စည်းတဲ့ အနောက်တိုင်း ဂီတသံမျိုးဖြစ်လာတော့တယ်။
အကြမ်းဖျဉ်းဆိုရရင်တော့ အနောက်တိုင်းဂီတမှာ အသံထုထည်ကို ရဖို့အတွက် အခြေခံ အသံစဉ်တခုမှာပါတဲ့ မိတ်ဖက်သံတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းရပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် စီ-မေဂျာ အသံစဉ်မှာ စီ၊ ဒီ၊ အီး၊ အက်ဖ်၊ ဂျီ၊ အေ၊ ဘီ ရယ်လို့ အသံ ၇ မျိုး ပါရှိတဲ့အထဲမှာ စီ-မေဂျာ အသံတွဲ ကော့ (ဒ်) (chord) ရဲ့ အဓိက ပါဝင်တဲ့ မိတ်ဖက်သံတွေက စီ၊ အီး နဲ့ ဂျီ ဖြစ်ပါတယ်။
မူလအခြေခံ (Fundamental) မေဂျာ အသံစဉ်တွေအတိုင်း လုပ်ထားတဲ့ စီ၊ အီး၊ ဂျီ ပလွေ သုံးလက်ကို တပြိုင်နက်ထဲ မှုတ်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့။ အသံထုထည်ပါတဲ့ စီ-မေဂျာ ကော့ (ဒ်) အသံထုထည်ကို ကြားရပါမယ်။ စီ၊ အီး၊ ဂျီ မေဂျာသံစဉ် ခြောက်ပေါက် ဝါးပလွေ သုံးလက်
အဲဒီ ‘တောင်သမန်’ သီချင်းရဲ့ မူရင်း မယ်လိုဒီ က ‘လက်တင်-အမေရိက’ နိုင်ငံခြားသံ စစ်စစ်ပါ။ မူရင်း သီချင်းက ၁၉၂၉ ခုနှစ်အတွင်းမှာ Ernesto Lecuona ရေးခဲ့တဲ့ ‘ဆီဘိုနေး’ (Siboney) လို့ခေါ်တဲ့ ကျူဘင် (Cuban) သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။ Ernesto Lecuona
1895-1963 ‘ဆီဘိုနေး’ ဓာတ်ပြား က တံဆိပ်
‘ဆီဘိုနေး’ ဆိုတာက ကျူးဘား (Cuba) ကျွန်းနိုင်ငံက မြို့ကလေးတမြ်ို့ရဲ့ နာမည်ပါ။ နောက်ပိုင်းခေတ်မှာတော့ ကျူးဘားနိုင်ငံတခုလုံးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဝေါဟာရ အဖြစ် အဓိပ္ပာယ်က ကျယ်ဝန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ Alfredo Brito
Connie Francis နဲ့ Bing Crosby တို့က အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ သီဆိုကြပါတယ်။ ‘ဆီဘိုနေး’ လို့ နာမည်တပ်ထားပေမယ့် မူရင်း ‘ဆီဘိုနေး’ သီချင်းစာသားရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ကိုယ်စားမပြုတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ မူကွဲသီချင်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ ‘ဆီဘိုနေး’ သီချင်းရဲ့ မူရင်း အသံစဉ်က စီ-မေဂျာ အသံစဉ်ပါ။ အခြေခံ စည်းချက်က ‘ကလစ်ဆို’ စည်းချက် (Calypso Beat) ဖြစ်ပါတယ်။ ‘ကလစ်ဆို’ စည်းချက်ဆိုတာ ထရီနီဒက်နဲ့ တိုဘာဂိုနိုင်ငံတွေက အာဖရိက နဲ့ ဥရောပ ဇာတိဖွားတွေရဲ့ အေဖရို-ကရစ်ဘီယံ (Afro-Caribbean) ဂီတဝင် စည်းချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ‘ကလစ်ဆို’ စည်းချက် အထဲက ရိုက်ချက်တွေကို နှေးနှေးပဲ တီးတီး၊ မြန်မြန်ပဲ တီးတီး အင်မတန်မှ မြိုင်မြိုင် ဆိုင်ဆိုင်ရှိလှပါတယ်။
အဲဒီ ‘ဆီဘိုနေး’ သီချင်းရဲ့ အနှစ်သာရက မွေးရပ်မြေနဲ့ အိမ်ကိုတမ်းတပြီး လွမ်းရတဲ့ ‘အိမ်ပြန်ချင်တဲ့ အလွမ်း’ လို့ ဆိုရပါမယ်။ စာဆိုရှင်က သူချစ်တဲ့ ‘ဆီဘိုနေး’ မြို့ကလေးကို သက်ရှိတဦးအဖြစ် သူ့ရဲ့ ချစ်သူပမာ တင်စားပြီး အချစ်နဲ့ အလွမ်းကို ဖွဲ့သွားပါတယ်။
ထန်းပင်ကလေးတွေက တသိမ့်သိမ့်နဲ့ ငါ့ကို ချော့ပြီး သိပ်လို့ အိပ်မောကျနေရင်းတောင်မှ
တမ်းတမ်းတတနဲ့ ငါ မင်းကို စောင့်နေပါတယ်ကွယ်။
မူရင်း တီးလုံးမှာ ပါဝင်တဲ့ ဆက်ဆိုဖုံးတွေအစား ဆရာမြို့မငြိမ်းက ဝါးပလွေတွေကို သုံးခဲ့တာပါ။ ဘေ့(စ်)ဒရမ် (Bass Dram) အစား သံစည်ပိုင်းပြတ်နဲ့လုပ်တဲ့ ဗုံကြီးကို သုံးခဲ့လိမ့်မယ်လို့ မှန်းဆရပါတယ်။ ကောင်းဘဲလ် (Cowbell) အတွက် ထန်းစေ့မှုတ်၊ ရှိတ်ကာ (Shaker) အဖြစ် မန်ကျည်းစေ့တွေ ထည့်ထားတဲ့ ဘူးသီးခြောက်ကို အစားထိုးပြီး ဒိုးဆရာ မြို့မ ဦးထွန်းရင် က ‘ကလစ်ဆို’ စည်းချက်တွေနဲ့ တောင်သမန်သီချင်း ကို အသက်သွင်းခဲ့တာပါပဲ။
ဆရာမြို့မငြိမ်းက မူရင်း ‘ဆီဘိုနေး’ သီချင်းတီးလုံးရဲ့ မယ်လိုဒီ ကိုပဲယူခဲ့ပါတယ်။ ‘ဆီဘိုနေး’ သီချင်းမှာ အလွမ်း ဝေဒနာတွေက လွှမ်းခြုံနေပေမယ့် ‘တောင်သမန်’ သီချင်းထဲမှာတော့ ငွေရောင် လှိုင်းကြက်ခွပ်ကလေးတွေ လူးကာ လှိမ့်ကာ မြူးထူးလို့ ကြည်ကြည်လင်လင် တောင်သမန် အင်းရေပြင် အပေါ်မှာ ပြေးလွှား ဆော့ကစားနေတဲ့ လေပြေ လေညင်းကလေးတွေနဲ့အတူ မြူးမြူးကြွကြွ သင်္ကြန်ကာလရဲ့ အေးအေးမြမြ မေတ္တာဓာတ်တွေ က ထုံမွမ်းလို့ နေပါတယ်။ တွေ့မြင် နားဆင်နိုင်ခွင့် မကြုံကြိုက်လိုက်ရတဲ့ အတိတ်ကာလ အချိန်တုန်းက ဆရာမြို့မငြိမ်း ရဲ့ ‘တောင်သမန်’ ကို မှန်းဆ တမ်းတလို့သာ လွမ်းရပါတော့တယ်။ လွမ်းလို့ရေးဖြစ်တဲ့ ဒီ စာတို ပေစကလေးကိုတော့ ‘တောင်သမန် သို့ တမ်းချင်း’ ကလေးတခုပါပဲလို့ ဆိုကြပါစို့။
(၃) မြို့မငြိမ်းနှင့်သူ့အနုပညာ၊ သန်းအောင်ခိုင်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၁၉၉၇
(၄) ဝင်းဖေလွယ်အိတ်၊ မြို့မငြိမ်း အနုပညာ၊ ပန်းချီ၊ ဒါရိုက်တာ-ဦးဝင်းဖေ၊ ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်း အသံလွှင့်ဌာန
10/24/2011 01:56:00 PM
ဗိုင်အိုလင်၊ ဗီယိုလာ တို့နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် အချိုးအစားအနေနဲ့ မြန်မာတယောရဲ့ လက်နှိပ်ကွက် လက်တံက ပိုပြီး တိုပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မြန်မာတယောက ကမ္ဘာသုံးတယောတွေရဲ့ပုံစံကို အတိအကျကူးယူထားတဲ့ မူပွားမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုချင်ပါတယ်။ တည်ဆောက်တဲ့ပုံစံကို မှီငြမ်းရုံသာမှီငြမ်းပြီး မြန်မာ့ဂီတအတွက် မြန်မာ့အသံစဉ်ကိုတီးဖို့ အသစ်တီထွင်လိုက်တဲ့ မြန်မာ့တူရိယာပါပဲ။ မွန်ရိုးရာတူရိယာဝိုင်းတွေမှာ ‘ထောင်တယော’ ဆိုတဲ့ ကြိုး ၃ ချောင်းတယော ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ မွန်ရိုးရာတီးဝိုင်းတွေမှာ ‘လခြမ်းကြေး နောင်’၊ ‘မိကျောင်း’ တူရိယာတွေနဲ့အတူ ‘ထောင်တယော’ ကို သုံးစွဲနေပါသေးတယ်။ အဲဒီထောင်တယောက မြန်မာတယောနဲ့ ပုံစံချင်း အင်မတန်တူပါတယ်။
ရှေးမြန်မာတယောက ကြိုး ၃ ချောင်းရဲ့ အသံညှိပုံစနစ်ကို တပ်အပ်မပြောနိုင်ပေမယ့် ‘ထောင် တယော’ နဲ့ တူညီနိုင်စရာအကြောင်းရှိပါတယ်။ ‘ထောင်တယော’မှာ ပါတဲ့ ဘယ်သံ ကနေ ညာသံ ကြိုးသုံးချောင်းကို အက်ဖ်၊ စီ နဲ့ ဂျီ သံတွေညှိထားပါတယ်။ မြန်မာ့သံစဉ်ရဲ့ ၅ ပေါက်၊ ၁ ပေါက်သံမှန် နဲ့ ၄ ပေါက်သံတွေဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာသုံး ဗိုင်အိုလင်ရဲ့ ဘယ်သံကနေ ညာသံ ကြိုး ၄ ချောင်းကို ဂျီ၊ ဒီ၊ အေ နဲ့ အီး အတိုင်း ညှိထားပါတယ်။ မြန်မာ့သံစဉ်ရဲ့ ၄ ပေါက်၊ ၇ ပေါက်၊ ၃ ပေါက် နဲ့ ၆ ပေါက်သံတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ ဗီယိုလာရဲ့ ဘယ်သံ ကနေ ညာသံ ကြိုး ၄ ချောင်းကိုတော့ စီ၊ ဂျီ၊ ဒီ နဲ့ အေ အတိုင်း ညှိထားပါတယ်။ ၁ ပေါက် သံမှန်၊ ၄
ပေါက်၊ ၇ ပေါက် နဲ့ ၃ ပေါက်သံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာရှေးသီချင်းတွေကိုတီးဖို့ရာ မြန်မာ့သံစဉ်အမျိုးမျိုးအတွက် အဆင်ပြေလှပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကြောင့် မြန်မာတယောတွေကို တလက် မကပဲ အတော်တော်များများလုပ်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့လည်း မှန်းဆကြည့်မိပါတယ်။
ပွတ်လုံးထိုးထားတဲ့ ထောက်တံက ထူးခြားပါတယ်။ ထောက်တံအပေါ်မှာ တယောကို လှည့်ပြီးကစားနိုင်တော့ တယောကြိုး သုံးချောင်းစလုံး အစွက် အဖက် လက်ကွက်တွေကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးခါစ ၁၉၄၆ ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင်လောက်တုန်းက မန္တလေးမြို့ လမ်းဘေးမှာ မြန်မာတယောကြီးကိုထိုးပြီး သီချင်းဆို လေ့ရှိတဲ့ တယောပညာရှင်ကြီး ‘ဘိုးကျန်’ ဆိုတာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၅၆-၅၇ လောက်မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့ ဘိုးကျန်ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ် ကျတွေ့လိုက်ရဖူးတဲ့ ပန်းချီ၊ ဒါရိုက်တာဦးဝင်းဖေက ဘီဘီစီ အသံလွှင့်ဌာန မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်၊ ၀င်းဖေလွယ်အိတ်ကဏ္ဍမှာ ပြောပါတယ်။
အဲဒီအချိန်တုန်းက အသက် ၈ဝ လောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ဘိုးကျန်က မျက်စိလည်း မမြင်ရှာတော့ပါ။ နားဆင်သူပရိသတ်က ပေးကမ်း ထောက်ပံ့တဲ့ငွေကြေးကလေးတွေကို လက်ခံပြီး စားရရှာတဲ့ဘိုးကျန်ကို မန္တလေးမြို့ အာဠ၀ီ၊ စီလမ်းအတိုင်းဆင်းသွားရတဲ့ သင်္ချိုင်းတော်တံ တား အနောက်ပိုင်းက ကျူးကျော်ရပ်ကွက်ကလေးတခုမှာ မြေးမိန်းကလေးတွေက စောင့်ရှောက်ထားခဲ့ကြတယ်။
ဘိုးကျန်က အသက်ကလည်းကြီး၊ ဒုက္ခိတလည်းဖြစ်နေရှာတာသက်သက်ကြောင့်တော့ လမ်းဘေးမှာ တီးမှုတ်နေခဲ့ရတာ မဟုတ်နိုင်ပါ။ ပန်းရံ ကံကျွေး လုပ်ကိုင်စားကြတဲ့ မြေးမိန်းကလေးတွေရဲ့အထောက်အပံ့နဲ့ နေနိုင်ခဲ့ပေမယ်လို့ ဂီတကို စွဲစွဲလမ်းလမ်းဖြစ်နေတာကြောင့် အဆို၊ အတီးဝါသနာကို မစွန့်လွှတ်နိုင်ပဲ လမ်းဘေးမှာ တီးမှုတ်နေခဲ့တဲ့ပုံပါ။ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေက အိမ်မှာခေါ်ထားပြီး ပြုစုရင်လည်း မနေနိုင်၊ မပျော်နိုင်ဘူးလို့ကြားရဖူးပါတယ်။
ဘိုးကျန် ရဲ့ လက်စွဲတူရိယာတွေက မြန်မာတယော၊ ပလွေ၊ စည်းနဲ့ဝါးတို့ဖြစ်ကြတယ်။ စည်းနဲ့ဝါး ကိုတော့ ခြေဖျားနှစ်ဖက်နဲ့ တီးလို့ရအောင် တီထွင်ထားပါတယ်။ ညာဘက်ခြေထောက်က စည်း၊ ဘယ်ခြေက ၀ါးကိုတီးပါတယ်။ သီချင်းဆိုရင်း၊ တီးမှုတ်ရင်းနဲ့ စည်းချက်တွေကို အမျိုးမျိုးကစားပြီး တီးပါသတဲ့။ မြိုင်ထ၊ ရှစ်ဆယ်ပေါ် တေးထပ်၊ ဇော်ဂျီတီးလုံး၊ မြန်မာဇာတ်သဘင်သံဆန်းတွေ ပလွေနဲ့မှုတ်တော့ ပလွေကို ပါးစပ်နဲ့ရော နှာခေါင်းနဲ့ပါ မှုတ်ပါတယ်။ တယောထိုးတဲ့အခါမှာတော့ ယမုံနာ၊ သောင်းသောင်းညံ စတဲ့ မြန်မာရှေးသီချင်းကြီးတွေ ကို ဆိုတီး တီးလေ့ရှိပါတယ်။
တဦးထည်းနဲ့ ဂီတသံလေးမျိုးကို ဖန်တီးနိုင်တဲ့ တကယ့်ပညာရှင်ကြီးပါပဲ။
၁၉၅ဝ ခုနှစ် စောစောပိုင်းမှာ အထက်မြန်မာနိုင်ငံ ဓါတ်ပုံအသင်း ဓါတ်ပုံဆရာတွေက ဘိုးကျန်ရဲ့ပုံကို ဓါတ်ပုံအမျိုးအမျိုး ရိုက်ပြီး ဓါတ်ပုံပြပွဲ ပြိုင်ပွဲတွေ လုပ်ခဲ့ကြသေးတယ်။ ရုပ်ရှင်ပိုစတာ ပန်းချီဆရာကြီး ဦးဘကြင်ကလည်း ဘိုးကျန်ရဲ့ပုံတူပိုစတာပုံကြီးကိုဆွဲပြီး ပြပွဲမှာ ပြခဲ့ပါသေး တယ်။ အဲဒါကြောင့် ဘိုးကျန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေ အများကြီးကျန်ခဲ့နိုင်စရာရှိပါတယ်။
ဒါရိုက်တာကြီး ရှုမ၀ ဦးကျော် ရိုက်ကူးသွားခဲ့တဲ့ ‘အပယ်ရတနာ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးထဲမှာ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်ကြီး ဦးကြည်မောင်က ပုဂံမြို့ အပယ်ရတနာ ဘုရားရှေ့မှာ တောင်းရမ်းစားသောက်ရရှာတဲ့ တယောဦးကျန်အဖြစ် ပီပီပြင်ပြင်သရုပ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် ရှုမ၀ စမ်းစမ်းအေး ကလည်း မြေးမကလေး မိအေး အဖြစ် ပီပြင်လှပါတယ်။ ဘယ်လောက် ပီပြင်သလဲဆိုရင် ‘အပယ်ရတနာ’
နဲ့အတူ တယောထိုးနေတဲ့ ဦးကျန်၊ သီချင်းဆိုနေတဲ့ မိအေးတို့ရဲ့ပုံရိပ်တွေက ဒီကနေ့အထိ ရင်ထဲမှာစွဲပြီး ကျန်နေရစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ တကယ်ရှိခဲ့တဲ့ ဘိုးကျန်နဲ့ သူ့ရဲ့ မြန်မာတယောကြီးကို ရှုမ၀ ဦးကျော်က ပုံတူကူးယူပြီး အပယ်ရတနာ ရုပ်ရှင်ကားထဲက ဇာတ်ရုပ်တယော ဦးကျန်အဖြစ် ဖန်တီးခဲ့တယ်လို့တွေးဆမိပါတယ်။
ဘိုးကျန်ကွယ်လွန်တော့ မန္တလေး ပန်တျာနဲ့ အကကျောင်း ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးစိန်ညွန့်က ဘိုးကျန်ရဲ့ မြန်မာတယောကြီးကို မြန်မာအနု ပညာပြတိုက်အတွက် အစိုးရကိုယ်စားဝယ်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့အထိ မြန်မာ့အနုပညာပြတိုက်ထဲမှာ ဘိုးကျန်ရဲ့ မြန်မာ တယော ကြီးကို နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းနဲ့အတူ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရှိနေဆဲပဲလို့ ယုံကြည်ရပါတယ်။
လက်ဖျားသံနှော မြန်မာတယောပညာရှင်ကြီး ဘိုးကျန်ရဲ့ မြန်မာတယောကြီးကို လေ့လာဖို့နဲ့ ဘိုးကျန်ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကို ရရှိနိုင်ဖို့တောင်မှ ဒီစာရေးနေချိန်မှာ လက်လှမ်းမမီနိုင်သေးပါ။ ဓါတ်ပုံဆရာကြီး Peter Adolphe Kliner က ၁၈၇၅ ခုနှစ် နဲ့ ၁၈၉ဝ ခုနှစ်တွေအတွင်းလောက်မှာ ရိုက်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့ ရှေးခေတ် ဓါတ်ပုံဟောင်းနှစ်ပုံထဲမှာ မြန်မာတယောရှင်တဦး ပါဝင်နေပါတယ်။ ဘိုးကျန် ငယ်ငယ်တုန်းကပုံများ ဖြစ်လေရော့သလားလို့ တွေးမိချင်စရာပါ။
(၁) မြန်မာစာပေသမိုင်း (ဦးဘေမောင်တင်၊ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃ဝဝ ပြည့်နှစ်)
(၃) တယော၊ ပလွေ ဘိုးကျန် (၀င်းဖေလွယ်အိတ်၊ ပန်းချီ၊ ဒါရိုက်တာ-ဦးဝင်းဖေ၊ ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်း အသံလွှင့်ဌာန)
10/24/2011 01:33:00 PM
လက်ဖျားသံနှော မြန်မာတယော – အပိုင်း (၁)
ရန်ဝင်း (တောင်တံခါး) စက်တင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၁
အောင်းကလေး တခြား ပတ္တလား နှင့်
ခြောက်မည် ငြိမ့်မျိုး ”
စာပေကျမ်းဂန်တွေထဲမှာ ‘တယော’ ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို တွေ့ရတာက ကုန်းဘောင်ခေတ် ဒုတိယပိုင်း ဘကြီးတော်ဘုရား ခေါ် စစ်ကိုင်းမင်း လက်ထက်၊ မုံရွေးဆရာတော် (မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၁၂၈-၁၁၉၆) ရေးခဲ့တဲ့ နာရဒပျို့ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ မုံရွေးဆရာတော် က မြ၀တီမင်းကြီး ဦးစ နဲ့ ခေတ်ပြိုင်စာဆိုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တယောတူရိယာကို အငြိမ့် တူရိယာ ၆ မျိုး အနက် တမျိုးအဖြစ် ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
မင်းတုန်းမင်းကြီးလက်ထက် (နန်းစံသက်၊ ခရစ် သက္ကရာဇ် ၁၈၅၂-၁၈၇၈) ရှေ့တော်ပြေး
တီးဝိုင်းအဖွဲ့မှာ အဆို က ဦးပေ၊ စောင်း မောင်မောင်သိုက်၊ မိကျောင်း ကို မောင်မောင်ကြီး တို့က တီးကြတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ဒေ၀ဣန္ဒာ မောင်မောင်ကြီး က မိကျောင်း အစား စောင်းကို ပြောင်းတီးတဲ့အခါ ကွမ်းဖိုးထိန်း ဦးမှို က တယော ထိုးတယ်လို့ အမှတ်အသားရှိပါတယ်။
၁၉၁၇ ခုနှစ် လင်းပင်မင်းသားကြီး အိန္ဒိယပြည်ကိုမသွားခင် သူစုဆောင်းထားတဲ့
တူရိယာတွေကို ပေးကမ်းခဲ့တုန်းက စောင်း၊ ညှင်း နဲ့ တယော တို့ပါဝင်ကြောင်းကို လူထုဒေါ်အမာရေးတဲ့ မြန်မာ့မဟာဂီတ စာအုပ်မှာ ဖတ်ရပါတယ်။ မြန်မာတယောကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးနေဆဲ အချိန်ကာလ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။
တိုင်းတပါးသားတွေနဲ့ အတွေ့အထိ ဆက်ဆံရေးတွေ အထူး များပြားလာတဲ့ ကုန်းဘောင်ခေတ် ဒုတိယပိုင်း အချိန်မှာတော့ ကမာသုံးတယောကို မြန်မာတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ထားပြီး ဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ အဲဒါကြောင့် မြန်မာတယော က ကမ္ဘာသုံး ဗိုင်အိုလင် ကို မွေးစားပြီး မြန်မာမှု ပြုထားတဲ့ တူရိယာဖြစ်လေရော့သလားလို့
စဉ်းစား ယူဆနိုင်စရာတွေ ရှိနေပါတယ်။
အဲဒီ အိမ်နီးချင်း ရိုးရာ တယောတွေနဲ့ မြန်မာတယောကို နိုင်းယှဉ်ပြီးကြည့်လိုက်ရင် ကွဲပြား ခြားနားတာတွေကို တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ အဲဒီ
ရိုးရာ တယောတွေမှာ အများအားဖြင့် ကြိုးနှစ်ချောင်းသာ ပါလေ့ရှိပါတယ်။ ကြိုးနှစ်ချောင်းကလည်း တယောလက်တံအပေါ်မှာ ဖိနှိပ်ထားပြီး အသံကိုဖေါ်ကြတာမျိုး
မဟုတ်ကြပါ။ ကြိုး သပ်သပ် အပ်ါမှာပဲ ဖိနှိပ်လို့ တီးကြရပါတယ်။
အဲဒီ ထောင်လိုက် ဗီယိုလာ တယောက အရွယ်နည်းနည်း ပိုပြီးကြီးပေမယ်လို့ မြန်မာတယောနဲ့ ပုံသဏ္ဍန်ချင်းကလည်း ခပ်ဆင်ဆင်၊ ထောင်လိုက်ထားပြီး ထိုးပုံရကလည်း တူနေတယ်ဆိုတော့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ချင်ပါတယ်။ ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ ထိုင်တာနဲ့ ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာထိုင်တာပဲ ကွာခြားပါတယ်။ သဘောချင်းကတော့ ဆင်တူပါတယ်။
မြန်မာတယော ကို ဖန်တီးရာမှာ ဗိုင်အိုလင် နဲ့ ဗီယိုလာ တို့ ရဲ့ပုံသဏ္ဍန်ကို
မှီငြမ်းပြုတယ်ပဲ ဆိုဦးတော့ ဆင်တူတယ်လို့သာ ပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သေသေချာချာယှဉ်ပြီးကြည့်ရင် ကွဲပြား ခြားနားချက်တွေ အများအပြားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
10/24/2011 01:31:00 PM
"ABHAYA - BURMA'S FEARLESSNESS"
"ABHAYA - BURMA'S FEARLESSNESS" with foreword by Aung San Suu Kyi
In 1962amilitary coup lead by General Ne Win saw Burma, an isolated Buddhist country in South-East Asia, come under the power of one of the world’s most brutal regimes. For the past five decades, thousands of people have been arrested, tortured and given long prison sentences for openly expressing their beliefs. Today, more than 2,000 political prisoners including monks, students, journalists, lawyers, elected Members of Parliament and over 300 members of Aung San Suu Kyi’s opposition party, The National League for Democracy, are incarcerated in horrendous conditions in Burma’s notorious prisons. In Burma and across the world, hundreds of former political prisoners have come together to raise awareness of the tragic plight of their colleagues still detained in jail. "Abhaya – Burma’s Fearlessness" is part of an international appeal for their liberation.
Abhaya - Burma's Fearlessness
Abhaya - Burma's Fearlessness from James Mackay on Vimeo.
"Abhaya - Burma's Fearlessness" Nupo Refugee Camp, Thailand
"Abhaya - Burma's Fearlessness" Nupo Refugee Camp, Thailand from James Mackay on Vimeo.
"Abhaya - Burma's Fearlessness" Japan
"Abhaya - Burma's Fearlessness" Japan from James Mackay on Vimeo.
Abhaya - CNN Interview
Abhaya - CNN Interview from James Mackay on Vimeo.
10/24/2011 03:12:00 AM
လစ်ဗျားလူထုတော်လှန်းရေးဖြစ်စဉ် အပိုင်း ၆
ဥပဒေဘွဲ့ ရ အိုမာ အယ် ဘာဒီ ဆိုတဲ့ လစ်ဗျားအမျိူးသမီးက နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေရှေ့မှာ သူ့ကို ဂဒါဖီတပ်တွေက ဆနပြပွဲမှာ ဦးဆောင်မူနဲ့ အဓမ ပြုကျင့်ခဲ့တာကို လူသိထင်ရှားဖွင့်ချချိန်က ဒီအစီအစဉ်ကို ဖန်တီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အယ် ဘာဒီ ရဲ့ ရဲရင့်တဲ့လုပ်ရပ်ဟာ နုိုင်ငံတကာကို ကိုင်လှုပ်ခဲ့သလို ဂဒါဖီ ကျဆုံးခန်းအစလို့လဲအဲဒီအချိန်က သုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ် …တချိန်ထဲမှာပဲ ဂဒါဖီရဲ့ ညာလက်ရုံး ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲဟောင်းနွှဲ နုိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မိုမာကူဆာကလဲ ဂဒါဖီနဲ့လမ်းခွဲ လန်ဒန်ကိုပြေး အတိုက်အခံတွေနဲ့ပေါင်းခဲ့ချိန်မို့ ဂဒါဖီဟာ အဲဒီအချိန်ကတဲက စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ကျဆုံးမူတွေနဲ့ စိတ်ဖိစီးမူတွေ စတင်ခံစားခဲ့ရချိန်လို့လဲ သုံးသပ်ကြပါတယ်… လစ်ဗျားလေ့လာလိုသူများအတွက် အပိုင်း ၆ ပါ။
ဘဏ်အားလုံးကို နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်ခွင့်ပြု
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဝင် ဖွင့်လှစ်ထား တဲ့ ဘဏ်အားလုံးကို အခုရက်ပိုင်း အတွင်း နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်တဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုလိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ်။
နိုင်ငံမှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ဘဏ် (၁၉) ခုစလုံး နယ်ဘဏ်ခွဲတွေပါ မကျန် ငွေလဲလုပ်ငန်း ချပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်တာကြောင့် လက်ရှိ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ရန်ကုန်မြို့၊ သိမ်ဖြူလမ်း ငွေလဲလှယ်ရေးကောင်တာ အပါအဝင် နိုင်ငံတဝှမ်းမှာ နိုင်ငံခြားငွေ တရားဝင် လဲလှယ်လို့ရတဲ့နေရာ အနည်းဆုံး ၅ဝ လောက် ပေါ်ပေါက်လာမှာ ဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနဲ့ လက်ရှိ ကမ္ဘောဇဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ ဦးသန်းလွင်က RFA ကို ပြောပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကနဲ့
အစိုးရက ထူထောင်ထားတဲ့ ဘဏ်တွေဖြစ်တဲ့ အင်းဝဘဏ်၊ မြဝတီဘဏ်၊ သမဝါယမဘဏ်၊ မြန်မာ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်၊ မြန်မာအရှေ့တိုင်းဘဏ်နဲ့ ကမ္ဘောဇဘဏ် စတဲ့ ဘဏ် ၆ ခုကို အခုလ ၁ ရက်နေ့ကစလို့ နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ ပထမဆုံး လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၁၉၄၇ ခုနှစ်ကတည်းက ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ငွေကြေးဥပဒေကို အခုထိ မပြုပြင်ရသေးတာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ နိုင်ငံခြားငွေ တရားဝင် ကိုင်ဆောင်ခွင့် မရှိသေးတဲ့ အခြေအနေမှာ အစိုးရက အခုလို ဘဏ်တွေကို ငွေလဲခွင့်လုပ်ငန်း ချပေးနေတာဟာ လက်တွေ့နဲ့ ကိုက်ညီမှု မရှိဘူးလို့လည်း ဝေဖန်မှုတွေ ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ဒီအတောအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်မှုနှုန်းထား တပြေးညီ သတ်မှတ်ရေးကိစ္စကို ကူညီဖို့ IMF ခေါ် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့က ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုရောက်ရှိနေပြီး မြန်မာအာဏာပိုင်တွေ၊ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်း
ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ သီတင်း ၃ ပတ်လောက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာကြမယ်လို့ သိရပါတယ်။
10/24/2011 12:06:00 AM
မြန်မာပြည်မှာ တစ်ဖြည်းဖြည်းဆိုးရွားလာတဲ့ သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ပြည်သူ့အကျိုးပြု မီးအိမ်ရှင် အမေများကွန်ယက် (အန်အယ်လ်ပီ) က ဆေးခြင်ထောင်တွေကို လှူဒါန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလ ၂၀ ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီအခမ်းအနားကို သံလျှင်မြို့ မြို့ဟောင်းအရှေ့ ဦးသိန်းတန်လမ်းက ဦးအောင်မင်း+ ဒေါ်တင်ရီ တို့ရဲ့နေအိမ်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့တာပါ။
ဒီပွဲကို ဦးလှသိန်း ၊ ဒေါက်တာဖုန်းဝင်း ၊ ဒေါ်တင်တင်ဝင်းတို့အပြင် အခုလ ၁၂ ရက်နေ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် သံလျှင်မြို့နယ် လူငယ်တာဝန်ခံ ကိုညီညီဦး နဲ့ ဒေါ်ပုံမြို့နယ်က ကိုဘိုဘိုဝင်းနိုင်တို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီပွဲမှာ ဆေးခြင်ထောင်တွေကိုလှူဒါန်းခဲ့တဲ့အပြင် သက်ကြီးရွယ်အိုတွေအတွက် တစ်လကို နှစ်ထောင်နှုန်းနဲ့ တစ်နှစ်စာ ထောက်ပံ့လှူဒါန်းခဲ့ကြပါသေးတယ်။
ပြည်သူ့အကျိုးပြု အမေများကွန်ယက်အဖွဲ့ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ခုနှစ်က လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အမေများကွန်ယက်အဖွဲ့အနေနဲ့ ထောက်ပံ့လှူဒါန်းတဲ့အခါမှာ ဘိုးဘွားရိပ်သာကို မသွားရောက်နိုင်ကြတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို အဓိကထားလှူဒါန်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
10/23/2011 08:09:00 PM
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံသို့ ပေးစာ
by Burma VJ Media Network on Friday, October 21, 2011 at 9:49am
နေ့စွဲ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၁ ရက်
၁၃၇၃ ခုနှစ် သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၁၄ ရက် (ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်) နေ့စွဲဖြင့် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးမှ အမိန့်အမှတ် ၄၉/၂၀၁၁ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့သည့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံသားများအပေါ် ထားရှိသည့် သမ္မတကြီး၏ မေတ္တာ စေတနာနှင့် ကရုဏာတရားကို လှိုက်လှဲဝမ်းမြောက်စွာ ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
သမ္မတကြီး၏ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုနှင့် သနားချစ်ခင်မှုတို့ကို အလေးထား ဆောင်ရွက်ပေးမှုကြောင့် ၁၃၇၃ ခုနှစ် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ (ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့) တွင် မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းရှိ အကျဉ်းထောင် အသီးသီးနှင့် အကျဉ်းစခန်း အသီးသီးတို့မှ အကျဉ်းသားပေါင်း ၆၃၅၉ ဦး ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ဤတွင် သမ္မတကြီးအား တင်ပြလိုသည်မှာ ယခုလွတ်မြောက်လာသူ ၆၃၅၉ ဦးတွင် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူများ (ဝါ) နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၀၀ ကျော်ခန့် (ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၃.၃ ရာခိုင်နှုန်း) သာ ပါဝင် လွတ်မြောက်လာသည့် ကိစ္စဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းရှိ အကျဉ်းထောင် အသီးသီးနှင့် အကျဉ်းစခန်းများတွင် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူများ (ဝါ) နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ စုစုပေါင်း ၁၃၀၀ ခန့်ရှိသည့်အနက် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အမိန့်အမှတ် ၄၉/၂၀၁၁ ဖြင့် လွတ်မြောက် လာသူ ၂၀၀ ကျော်ခန့် ရှိသည့်အတွက် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူများ (ဝါ) နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၁၀၀၀ ကျော်ခန့် ဆက်လက် အကျဉ်းကျခံနေရဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေးတွင် အမျိုးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ အားလုံး ချွင်းချက်မရှိ ပြန်လည်လွှတ်ပေးရေးနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးတို့နှင့် နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာရေးတို့သည် အဓိကကျသော ကနဦး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မှ လေးနက်စွာ ယုံကြည်သည့်အလျောက်၊ ကျန်ရှိနေသေးသည့် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူများ (ဝါ) နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားလုံးအတွက်လည်း အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အမိန့်များ ထပ်မံ ထုတ်ပြန်ပေးပါရန် အလေးအနက် မေတ္တာရပ်ခံ အပ်ပါသည်။
သမ္မတကြီး၏ သန့်ရှင်းစင်ကြယ် မွန်မြတ်သည့် စိတ်ဓာတ်၊ နိုင်ငံသားများ အားလုံးအပေါ် ထားရှိသော ကြီးမားသည့် မေတ္တာ စေတနာတို့ကို ယုံကြည်အားကိုးစွာဖြင့် ကျန်ရှိနေသေးသည့် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူများ (ဝါ) နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၁၀၀၀ ကျော်တို့၏ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ယခုကဲ့သို့ မေတ္တာရပ်ခံ တင်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပါ ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး အနေဖြင့် ကရုဏာ ရှေ့ထား၊ သက်ညှာစွာ စဉ်းစားပြီး အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အမိန့်များ ထပ်မံထုတ်ပြန်ပေးပါရန် အနူးအညွတ် ပန်ကြားအပ် ပါသည် ခင်ဗျား။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ရေး လက်မှတ်ရေးထိုးလှုပ်ရှားသူများကိုယ်စား
ကိုတိုးကျော်လှိုင် (ဖုန်း ၀၉ ၅၀၆၄၉၂၄)
ကိုဖြိုးမင်းသိန်း (ဖုန်း ၀၉ ၅၀၇၆၂၃၄)
10/23/2011 08:02:00 PM
စလင်း-ဆင်ဖြူကျွန်း ရေဘေး အာဏာပိုင် ဘာမှ မကူညီ
မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်း ရေကြီးမှုတွင် အာဏာပိုင်တွေဘက်မှ ကားတွေနဲ့လာကြည့်ပြီး ကားတွေနဲ့သာပြန်သွားတယ်.. ဘာအကူအညီမှ မပေးခဲ့ဘူးဟု ဒေသခံတွေက ဆို
10/23/2011 07:57:00 PM
မြစ်နှစ်ခုနဲ့ ဘ၀တစ်ခုကို တည်ဆောက်သူများ
တကယ်တော့ စစ်တောင်းမြစ်ဝကနေ သံလွင်မြစ်ဝ မော်လမြိုင်ဟာ မိုင်တစ်ရာကျော်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့က စစ်တောင်းမြစ်ဝ ၀န်းကျင်မှာရှိတဲ့ စစ်တောင်း၊ ကမ်းကြီးဆိပ်၊ ကျောက်ဆိပ်၊ အညာစု၊ အုတ်ဖို၊ သိမ်ဇရပ်မှာ အခြေချနေကြပါတယ်၊ တ ပေါင်းလကနေ ၀ါခေါင်လထိ ခြောက်လလောက်ပဲ ကိုယ့်ရွာမှာ နေကြရပါတယ်၊ ၀ါခေါင်လလောက်ဆိုရင် စစ်တောင်းမြစ်တစ်ဝိုက်မှာ ငါးမရတော့ပါဘူး၊
ဒီတော့ ငါးရှိတဲ့နေရာရှာရင်းနဲ့ သံလွင် မြစ်ဝဘက်ကို ရောက်လာကြတာပါပဲ၊ အဲဒီအခါ ကျောင်း နေတဲ့ ကလေးတွေကို အဘိုး၊ အဘွား ဆွေမျိုးတွေမှာ အပ်ထားပြီး လူနှစ်ယောက် လှေတစ်စင်း၊ စက်တစ်လုံး၊ ပိုက်တစ်ဖုံလောက်နဲ့ သံလွင်မြစ်ဝ မော်လမြိုင်ဘက် ကို ဆင်းလာကြပါတယ်၊ ဟွန်ဒါစက်ကလေးနဲ့ဆို မောင်းရတာ ဆီလေးဂါလန်လောက် ကုန်ပါတယ်၊ မိန်းမ၊ ကလေးတွေက ရထားနဲ့ သွားကြပါတယ်။
လာကြတဲ့သူတွေလား၊ စစ်တောင်းတစ်ဝိုက်ရွာတွေက မိသားစု ၂၀၀ လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်မှာဆိုရင် သံလွင်ဈေးနားက(၂၈)အိမ်မှာ တစ်စု၊ အဲဒီကနေ သံလွင်မြစ်တောင်ဘက် ဆက်ဆင်းလာရင်
အခုကျွန်တော်တို့နေတဲ့ ကျောက်ပွန်လို့ခေါ်တဲ့ မုပွန်တိုးချဲ့ရပ်ကွက်ကမ်းနားမှာ တစ်စု၊ နောက်ကျောက်တန်းမှာ တစ်စု၊ သံလွင်မြစ်ကျောအတိုင်း တောင်ဘက်ဆက်ဆင်းသွားရင်မုဒုံမြို့နယ် ဘလောက်၊ ညောင်ဝိုင်း၊ ကတုံးပေါ်ရွာဘက်မှာ တစ်စု၊ နောက်ပြီး သံလွင်မြစ်အနောက်ဖက် ဘီလူးကျွန်းနတ်မှော်ဘက်မှာလည်း တစ်စု ရှိကြပါတယ်။ ဒီမှာက ဆရာမြင်တဲ့အတိုင်း
ခုနစ်အိမ်လောက်ပဲ ရှိပါတယ်၊ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲက ညဘက်ဘက်ထရီသုံး တီဗီပေါ့၊ လွတ်လပ်ရေးနေ့ပြီး နောက်နေ့ဆိုရင်ပဲ ကုလား ဟင်းနဲ့ ကြက်သားဆီပြန်ဟင်း စတုဒိသာ ခံတာပေါ့၊ ဗီဒီယိုလည်း ပြပါတယ်၊ရွာထဲကသူတွေလည်း လာကြတာ၊ ပျော်စရာကြီးပါပဲ၊ ဒီကိုရောက်တော့ ကျောက်တန်းက ငါးရွဲတွေဆီမှာ ငါးပေးကြိုငွေ နှစ်သိန်းလောက်ဆွဲပြီး၊ လိုတဲ့ ပန်းကန်အိုးခွက်၊ ဆန်၊ ဆီတွေ ၀ယ်ရတာပေါ့၊ ၆ ပေပတ်လည်ဝါးအိမ်ကလေးတွေ ဆောက်ပြီး နေကြပါတယ်၊ မိန်းမတွေက အားရင်အခုလိုပဲ ပိုက်ဖာ၊ ပိုက်ဆက်ပေါ့၊ ရလာတဲ့ငါးတွေကို ကျောက်တန်း ငါးရွဲတွေဆီကို ပေါက်ဈေးအတိုင်း သွင်းရပါတယ်၊ ဈေးကွာရင် နောက် နေ့ပြန်ပြောလို့ရပါတယ်၊ ငါးပေး ကြိုတင်ပေးငွေတွေလား၊ ငါးအရကောင်းရင် ပြန်ဆပ်ကြပါ တယ်၊ ခက်တော့ခက်သား၊ လူဆိုတာက နေလို့ရရင် နေကြတာပဲ၊ မနှစ်ကဆို ငါးအရနည်းကြတော့ ပြန်ဆပ်တဲ့သူ နည်းပါတယ်၊ဒီနှစ်လာတော့လည်း ပြန်ချေးပေးတာပါပဲ၊ သူ့ဆီကိုပဲ လှေတစ်ခေါက် ငါးရသလောက်တော့ သွင်းရပါတယ်။
ဒီလိုပဲ စစ်တောင်း၊ သံလွင်ခွပြီး အစုံအဆန် နေလာတာ
၁၅ နှစ်ကျော်နေတော့ . . .
ဒီမှာနေရတာ အလုပ်ကြောင့်ဆိုတော့ ရွာမှာနေတာလောက်တော့ ဘယ်ပျော်ပါ့မလဲ၊ ဒီလိုပဲ စစ်တောင်း၊ သံလွင်ခွပြီး အစုံအဆန် နေလာတာ၁၅ နှစ်ကျော်နေတော့ . . .
ကလေးတွေ အတန်းကျောင်းကတော့ ဒီအုပ်စုမှာဆိုရင် (၃-၄) ယောက်လောက်ပဲ ရွာမူလတန်းကျောင်းမှာ ထားနိုင်ပါတယ်၊ ဆွေမျိုးတွေ ၀ိုင်းကြည့်နိုင်သူတွေပေါ့၊ ဆွေမျိုးဆိုတာကလည်း မလာခင်လည်းပေး၊ ပြန်သွားရင်
လည်း ပေးရပါတယ်၊ သူတို့လည်း ကိုယ့်လိုပဲ အဆင်မပြေကြဘူးလေ၊ ကျန်တဲ့ကလေးတွေက
ကျောင်းဖွင့်ချိန် ဒီရောက်လိုက်၊ ကျောင်းပိတ်ချိန် ရွာပြန်ရောက်နဲ့ ဒီလိုပဲ ပြီးသွားကြပါတယ်။ ငါးအရအမိလား၊ နည်းပါတယ်၊ မိုးကတစ်အားများနေတော့ အအေးပိုလို့ ငါးတွေမတက်ကြပါဘူး၊ အခုရောက်ကတည်းက (၃)ရေလောက်ရှိပြီ၊ ဟုတ်တိပတ်တိ မမိသေးပါဘူး၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုဆိုရင် ငါးပုဏ္ဏား၊ ငါးပုတ်သင် (ငါးပျက်) ရတာများပါတယ်၊ပြာသို၊တပို့တွဲ၊ တပေါင်းဆို ငါးသလောက်ရာသီပေါ့၊ ရှေ့ဆက်ပြီး ငါးအမိ၊ အရများဖို့ပဲ ဆုတောင်းနေရပါတယ်၊ အရင်းအနှီးလား၊ လှေက နှစ်သိန်းကျော်၊ ပိုက်က ငါးသိန်း၊ ခြောက်သိန်းလောက် ရှိတယ်၊ စက်ကတစ်ပတ်ရစ်ဆိုတော့ နှစ်သိန်းနီးပါး၊ အားလုံးပေါင်း ၁၀ သိန်းလောက်ရှိမှာပါ၊ လိုင်စင်က ဒီကငါးလုပ်ငန်းက လာလုပ်ပေးပါတယ်၊ ဧည့်စာရင်းတိုင်ပြီး နေကြရပါတယ်။ ငါးဈေးနှုန်းလား၊ မနှစ်က ငါးသလောက် တစ်ပိဿာ နှစ်သောင်း၊ ဒီနှစ်က သုံးသောင်းလောက်ပေးပါတယ်၊ ငါးပုတ်သင်(ငါးပျက်)က မော်ဒယ်ဆိုရင် နှစ်သောင်းကျော်၊ ဒီနှစ်လည်း ဒီဈေးလောက်ပဲ ရှိပါတယ်၊ အငယ်တွေက တစ်သောင်း ခွဲလောက်ပဲ ရှိပါတယ်။
နေထိုင်မကောင်းရင် ဒီလိုပဲ ရွာထဲက ဆေးခန်းမပြေးနိုင်ပါဘူး၊ စပ်ဆေးတွေနဲ့ပဲ ပြီးပါတယ်၊ ခုချိန်ထိတော့ ၀မ်းတို့ဘာတို့တော့ မဖြစ်ကြပါဘူး၊ ရွာပြန်တာက တပေါင်းလဆုတ်ဆိုရင် ပြန်ကြပါတယ်၊ ဒီမှာနေရတာ အလုပ် ကြောင့်ဆိုတော့ ရွာမှာနေတာလောက်တော့ ဘယ်ပျော်ပါ့မလဲ၊ ဒီလိုပဲ စစ်တောင်း၊ သံလွင်ခွပြီး အစုံအဆန်နေလာတာ၊ ၁၅ နှစ်ကျော်နေတော့ အကျင့်ဖြစ်နေပါတယ်၊ ဒီမှာလည်း ရွာခံတွေနဲ့ သင့်အောင်နေရသလို စီးပွားလာရှာတာဆိုတော့ ဆင်ခြင်ပြီးနေကြရပါ တယ်၊ တချို့လူငယ်တွေဆိုရင် ဒီလိုသွားရင်းလာရင်း အိမ်ထောင်တွေကျ၊ သားသမီးတွေရတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်၊ဘ၀ကံကြောင့် အခုလို ထူးထူးခြားခြားမြစ်နှစ်ခုနဲ့ ဘ၀တစ်ခုကို တည်ဆောက်နေရတာပါ။
Written by မောင်မောင်ရွှေမြိုင် သစ်ထူးလွင်